‘सरकार फेरबदल कर्णालीमा छलफल गरेर हुदैन अहिलेसम्म गुट बनाँइन, त्यहि मेरो सफलता हो’ — Raranews.com
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यतिबेला असफल भएको, कामै गर्न नसकेको, संसदीय दलको नेतृत्व गतिलो ढंगमा गर्न नसकेको, विकास निर्माणमा कमजोर, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता आरोपहरु सत्तापक्षीय संसदहरुबाटै खेपिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३३ सीट प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकार सत्तापक्षीय संसदकै नजरमा के निरीह बनेकै हो त ? के अब सरकार फेरबदल हुन्छ ? किन विकास गर्न सकिएन ? यो सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप तपाइकै पार्टीले लगाइरहेको बेला बिकल्प किन दिनु हुन्न ? जस्ता विभिन्न पछिल्ला शन्दर्भमा मुख्यमन्त्री शाहीसँग नयाँ नेपाल दैनिकका कार्यकारी सम्पादक शेरबहादुर थापाले कुराकानी गरेका छन्, प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश । साभार गरेका छौ